Ngokuvamile kwenzeka ukuthi umuntu, lapho ebona iphupho, ehlushwa umbuzo - angasho ukuthini, yiziphi izinguquko ekuphileni okushoyo isithembiso sephupho, lapho amandla amakhulu axwayisa khona. Ukwenza kube lula ukuqonda ukubikezela kwekusasa, kunencwadi yokuphupha. Izikebhe, isibonelo, ezibonwe ephusheni, zingatshela okuningi. Okokuqala, udinga ukwazi ukuthi noma yiziphi izicathulo eziphupha noma yisiphi isenzo esisebenzayo. Isibonelo, uma wenza amaphuzu ngekusasa futhi uphupha ngezicathulo eziqhekekile, izinto ngeke zihambe kahle ngendlela ongathanda ngayo. Yilungele izinkinga ezingenzeka ekusetshenzisweni kwezinhloso zakho, uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uhlole zonke izinzuzo nezingozi, mhlawumbe ubuyekeze uhlelo lwesenzo.
Uma uphupha izicathulo ezingcolile - vula ibhuku lephupho. Izicathulo kuleli fomu ziphupha ngezinkinga ebhizinisini. Mhlawumbe lesi sixwayiso silindile, ungalindela izingxabano nokuyeka emsebenzini, uqaphele futhi uqaphele ekusebenzelaneni nabalingani bakho nabaphathi. Uma izicathulo ozibonayo ephusheni zikhulu kuwe - lokhu kuyisixwayiso: ukulinganisela umcibisholo wakho uphinde uphinde ucabangele izinhlelo, kungenzeka ukuthi ziningi kakhulu ukuthi zizisebenzise kahle. Uma, ngokuphambene nalokho, izicathulo zincane kuwe futhi zishaya umlenze wakho - udinga ukuthatha izinyathelo ezisebenzayo ukuze izinhlelo zakho zingasetshenziswa.
Izicathulo ezilula nezicacile ezibonwa ephusheni zingabonisa ukuthi kunendlela elula futhi ethembekile yokuxazulula izinkinga zakho - cabanga ngakho. Uma unamapulangwe asekhaya asephusheni - bheka ibhuku lephupho. Izinwele zalolu hlelo, cishe, lubonisa ukuthi impilo yakho iyaqhubeka ngendlela efanele, unethemba esikhathini esizayo futhi izindaba zakho zizinzile. Izicathulo zezemidlalo, ezibonwe ephusheni, ngokuphambene nalokho, zibonisa ukuthi kubalulekile ukusheshisa isixazululo sezindaba ezithile ezibalulekile futhi uqale ngokuzimisela ukuhumusha izinhlelo zabo zibe yiqiniso. Uma usomabhizinisi, izinto azihambi ngendlela ongathanda ngayo, izicathulo ezingaphazanywanga ezibonwe ephusheni zingakutshela - awukwazi ukwenza ngaphandle komlingani onokwethenjelwa!
Uma uphupha ukuthi ulahlekelwe izicathulo zakho , qaphela, futhi uvula ibhuku lephupho. Izikebhe, ezilahlekile ngaphansi kwezimo ezithile, zingase zifane nezinkinga ezinkulu ebhizinisini. Uma uphupha wabona ukuthi omunye uhamba ezicathulweni zakho - udinga ukuqapha. Lokhu kungase kusho ukuthi osebenza nabo ukhomba endaweni yakho. Ekuphileni komndeni - qaphela ukukhashelwa ngumkakhe. Uma uphupha wabona ukuthi izicathulo zakho zaqothulwa futhi zachithwa - lokhu kungase kusho ukugula kwabantu abaseduze. Lapho unikezwa umsebenzi omusha, futhi ngephupho wabona ukuthi uzama ukufaka izicathulo ezincane kuwe ngobukhulu - cishe, umsebenzi ohlongozwayo ngeke ube ngokwakho.
Ungakwazi ukuphupha ukuthi uya esitolo ukuthenga izicathulo ezintsha noma amabhuzu - bheka ebhokisini lephupho. Ukuthenga izicathulo ezinamacici - ungakhohlisa, noma kunjalo, ngezinhloso ezinhle. Uma ephusheni uthenga izicathulo ezindala - ngokucophelela! Lokhu kungase kube isixwayiso sokuthi ulinde izinkinga zokuhweba. Amabhuzu azokwazisa ukuthi kufanele uqaphele, othile ufuna ukukukhohlisa, futhi ukuxosha kuxwayisa ngokungahambisani nemali engenakulungiswa. Uma lezi zicathulo, ezibonakala ephusheni, zihlanjululwa ngothuli - ungenza izitha, uqaphele ukuveza umbono wakho ngomunye umuntu.
Okuningi kungachaza ibhuku lephupho. Izicathulo ezimhlophe, isibonelo, zifanekisela ukuphumelela ezindabeni zomuntu siqu, futhi ibhizinisi elimnyama. Kodwa qaphela uma ubona izicathulo zephupho ngezintambo. Lokhu kungabonisa izingxabano kanye nezisulu emndenini. Uma une-penchant yokugembula futhi uphupha izicathulo ngezithende ezigqamile - qaphela, leli phupho lingakuxwayisa mayelana nokulahleka okungenzeka okukhulu. Uma ephusheni ulungisa izithende zakho - ungangena esikweletini. Futhi, ukulahlekelwa ukulahlekelwa kungasho ukuphupha amabhuzu nge-bootlegs ephukile.
Ngezinye izikhathi ungase uzizwe ngokucacile ephusheni ukuthi izicathulo ozigqoka ziqinile kakhulu futhi azikhathazeki kakhulu. Lokhu kungenzeka ukuthi yi-echo yeqiniso, lapho uhaqwe abantu abangathandekayo ongathanda ukuwaqeda. Uma ubona ephusheni ukuthi uthenge izicathulo ngezithende eziphakeme - ungathola umehluko omkhulu. Ukuze ubone izicathulo eziningi ephusheni - uzothola imigwaqo eminingi nezinzuzo ezithakazelisayo.
Kungani ukuphupha kwasebusika? Umhumushi wephupho uzochaza
Kungani izingane ziphupha. Dream Interviewer
Zinc Wamafutha izinsana: indlela bokuthi dermatitis
Indlela Vula Windows Registry Umhleli 7: imiyalelo enemininingwane